2 လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုလေ့ကျင့်နည်း Noti ကြောင်များ
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | သိချင်စိတ်
ကလေးဘဝကတည်းကကျားသည်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည် အလွန်ဆိုး။ သူ၏သွားများစတင်ဝင်ရောက်သည်နှင့်တတိယသုံးပတ်အရွယ်တွင်သူသည်လူသားများမနှစ်သက်သောနည်းဖြင့်ပြုမူလာလိမ့်မည်။ ပြီးတော့သူကအရာအားလုံးကိုသူ့ပါးစပ်၊ လက်သည်းတွေနဲ့စူးစမ်းချင်တယ်။ ဒီအသက်အရွယ်မှာပျက်စီးမှုသိပ်မများပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့ကိုအကြိမ်များစွာလုပ်နိုင်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ကအဲဒီလိုဆက်ဖြစ် ဦး မလားဆိုတာကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကစဉ်းစားမိတယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ထိုမေးခွန်း၏အဖြေရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးသည့်အရာပေါ် မူတည်၍ သတိရှိရှိဖြင့်သို့မဟုတ်မသိစိတ်ဖြင့်ကလေးငယ်သည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းပြုမူလိမ့်မည်။ မနက်ဖြန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမူနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်၊ သိရန်လိုအပ်သည်2လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုလေ့ကျင့်နည်း။ "နဂါးလေး" ကိုလူမှုရေးဂူအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
1 ၂ လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုပြုစုဖို့ဘာလိုအပ်သလဲ။
သင်အများဆုံးလိုအပ်လိမ့်မည် သည်းခံခြင်း။ သည်းခံခြင်းတွေအများကြီး။ ကြောင်ကလေးကသင့်ကိုတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာ၊ သင့်ကိုနေ့စဉ်စမ်းသပ်ရန်သွားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရင်ခွင်ပေါ်သို့တက်သွားလိမ့်မည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အိပ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားအချိန်များတွင်ကစားရန်သော်လည်းကောင်း၊ ယခုခေတ်တွင် 'ကစားခြင်း' ဟူသောစကားလုံးသည်လက်များ၊ လက်မောင်းများနှင့်ခြေထောက်များအပါအဝင်အရာဝတ္ထုများကိုခြစ်ရာခြင်းနှင့်ကိုက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ဒါပေမယ့်မနိုင် ပျားရည်။ တကယ်တော့ဒါဟာအရေးကြီးတယ်။ ကလေးငယ်သည်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုနေ့တိုင်းမရရှိလျှင်၎င်းသည်မိသားစုနှင့် the ည့်သည်များနှင့်မသင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုမူမည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုအမြဲတမ်းသတိရရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ငါတို့ကိုခြစ်ရာမကိုက်စေရဘူး။ ဘယ်တော့မှ (သို့မဟုတ်လုံးဝနီးပါးဘယ်တော့မှ) ။ ထို့ကြောင့်, ငါတို့မှာအမြဲတမ်းကစားစရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကြိုးရှိတယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသူနဲ့ကစားဖို့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘာမျှမရှိပါကဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ဆိုဖာပေါ်သို့ရောက်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လျှော့ချလိမ့်မည်။ နောက်တဖန်ထ။ ငါတို့ကိုတိုက်လျှင်၊ သူသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်အထိ။ အစပိုင်းတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူမတိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းသင်ယူရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ သို့သော် အချိန်နှင့်သည်းခံခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်သောနောက်အချက်တစ်ခုမှာလူမှုဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ကြောင်ကမိသားစုနဲ့ပိုကြာလေပိုကောင်းလေဖြစ်မယ်။ အကယ်၍ သူ့ကိုတစ်နေ့လုံးအခန်းထဲ၌လူနှင့်အဆက်အသွယ်အနည်းငယ်သာဖြင့်ပိတ်ထားလျှင်သူသည်လူအများစုကိုရှောင်ရှား။ လူမှုရေးမဆန်သောကြောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ တိရစ္ဆာန်များကိုကလေးများနှင့်လူကြီးများလက်များဖြင့်ကိုင်ထားရမည်။ အိမ်တွင်နေထိုင်သောအခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကစားရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့မှသာသူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေထိုင်ရန်သင်ယူလိမ့်မည်။ ညဉ့်အခါ, သင်လွယ်ကူသောအနားယူပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြောင်နှစ်လကျော်ပြီဆိုရင်၊ သင်ကဆက်ပြီးပညာပေးရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသာမန်ပြုမူနေထိုင်ပြီးအိမ်ထဲမှာဘာမှမဖျက်ဆီးဘဲအချိန်တိုင်းချစ်တတ်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ထိုအခါ သင့်ကြောင်ကိုအမူအကျင့်ကောင်းရှိအောင်သင်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်အရိပ်လက္ခဏာအချို့ပေးပါမည် သူငယ်ငယ်ကတည်းက။
သင်၏ကြောင်ကိုသင်နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိစေရန်သင်နှင့်သူအစမှစတင်ပေါင်းသင်းရန်အရေးကြီးသည်။ လူများကဲ့သို့ပင်ကြောင်များသည်၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအပြုအမူများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်များစွာသင်ယူနိုင်သည်။ သင်၏ကြောင်သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်၊ သင်သည်၎င်းတို့ကိုငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှနှစ်ပတ်မှ စတင်၍ ပေါင်းသင်းရမည်။
၁၀ မိနစ်လောက်သင်ကလေးကိုခဏခဏခဏခဏထားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ လူများကိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုရန်အခြားလူများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအကြံဖြစ်သည်။ သင့်ကြောင်နှင့်ကစားခြင်းအလေ့အထကသူ့ကိုမကောင်းသောသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းတက်ကြွသောအပြုအမူများကိုဖော်ပြရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
သငျသညျအပျနှံအပေါင်းတို့နှင့်သည်းခံခြင်းထက်ရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုအပြစ်ပေးရန်နှင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆက်ဆံရန်မမေ့ပါနှင့်။ သူသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုလိုအပ်သည် ဖြစ်၍ သင်၏အနားတွင်သူအောင်မြင်နိုင်မည်
ခွေးများမဟုတ်သော်လည်းကြောင်များကိုရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်လည်းသင်ကြားနိုင်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာသည့်ကြောင်တစ်ကောင်ထားခြင်းက ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကူညီရန်သင်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် နာခံမှု ရှိ၍ လက်ခံသောကြောင်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
မက်လုံးပေးခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းသည်ဤအဆင့်တွင်သင်၏လျှို့ဝှက်လက်နက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ကြောင်ကိုထိုင်ပြီးထိုင်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်ရန်သင်ပေးလိုပါက \_ t လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သင့်ကြောင်လမ်းညွှန်နှင့်လှုံ့ဆျော တစ်မက်လုံးပေးအဖြစ်အစားအစာကိုအသုံးပြုခြင်း။ ကြောင်များကိုနာခံရန်သင်ကြားရန်နောက်တစ်နည်းမှာဆူညံသံကိုအစာနှင့်အစာစားခြင်းဖြင့်သင်၏ကြောင်သည်အသံကိုအပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခု၏ကတိနှင့်စတင်ပေါင်းသင်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤအဆင့်သည်အရေးအကြီးဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်သင်၏အစိတ်အပိုင်းအပေါ်ဇွဲနှင့်သင်၏ကြောင်ထံမှအားပေးမှုမှဆင်းလာပါတယ်။ အမှိုက်သရိုက်များ၏နေရာကိုယူပါ။ မင်းရဲ့ကြောင်ကိုမင်းကိုအသုံးပြုစေချင်ရင်သူတို့ကိုမင်းကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးရမယ်။ သင့်အိမ်ကလေးအတွက် ၀ င်ရောက်ရန်တိတ်ဆိတ်။ လွယ်ကူသောနေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်အမှိုက်ပုံးထဲသာမကအစားအစာ၊ ရေနှင့်အိပ်ရာကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအပြင်သင့် kitty ၏အကြိုက်ဆုံးကစားစရာများထားရှိရန်သေချာစေရမည်။ သူတို့လိုအပ်တာအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သူတို့အမှိုက်သရိုက်များအသုံးပြုရန်စတင်အသုံးပြုလာကြလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်ထိရောက်သောလှည့်ကွက်တစ်ခုမှာသူမနိုးလာသည့်အခါသို့မဟုတ်အစာစားခြင်းပြီးတိုင်းအချိန်တိုင်းသင့် kitty ကိုသူမ၏အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသူသည်ရေချိုးခန်းသို့သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါကယင်းကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်ဘယ်လိုပြီးမြောက်? တတ်နိုင်သမျှသင့်ကြောင်ကိုစတင်လေ့လာပါ။ ၎င်းသည်မတော်တဆမှုများကိုလျော့နည်းစေပြီးအမှိုက်သရိုက်များလေ့ကျင့်ပေးမှုကိုပင်ပန်းစေသည်။
သင်၏ကြောင်နှင့်ကစားရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏တိုးတက်မှုအတွက်တိုးတက်သည်။ သူဟာကြောင်လေးအရုပ်တွေနဲ့ကစားတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကစားစရာကစားစရာတွေနဲ့ကစားဖို့သင့်တော်တယ်၊ ကစားခြင်းသည်သင်၏ကြောင်အားသူ၏သန်စွမ်းသော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၊ သူ့အမဲလိုက်အလိုအလျောက်ကျေနပ်စေရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်သင်နှင့်ပေါင်းသင်းရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသည်။.
အခြားလေ့ကျင့်မှုအမျိုးအစားများနည်းတူ ကစားရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကြောင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဂိမ်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တပ်ဆင်ပြီးသင်ကစားသောဂိမ်းများသည်သင်၏ကြောင်ကိုနောက်ပြန်မလှည့်ဘဲတိုးတက်အောင်သေချာစွာပြုလုပ်ရမည်။ သင်ရွေးချယ်သောကစားစရာများပင်သင်၏ကြောင်၏ကစားလိုစိတ်ကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကစားစရာများကို ၀ ယ်သည့်အခါအရွယ်ရောက်ကြောင်များမဟုတ်ဘဲကလေးများအတွက်ကစားစရာများ ၀ ယ်ရန်သေချာပါသည်။
အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကောင်းသောအပြုအမူကိုအားဖြည့်ပေးသည့်အခါကြောင်များသည်မှန်ကန်စွာပြုမူတတ်ရန်သင်ယူကြသည်။ သင့်ဘဝ၏အခြားအဆင့်များ၌အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုသင်သတိပြုမိကောင်းတွေ့လိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကြောင်များနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ဒါ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကြောင်ကိုမှန်ကန်စွာပြုမူဆက်လက်ရန်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်။
အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းသည်ကျန်းမာသောအပြုအမူကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မကောင်းသောအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကြောင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ပြုမူသည်ကိုသတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သူ့ကိုအပြစ်ပေးရန်အသုံးချနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ကောင်းသောအပြုအမူများကိုအမှန်တကယ် Internalize လုပ်ရန်မှာ၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။
သင်၏ကြောင်ကိုသူတို့အမှားလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်အပြစ်ပေးခြင်းသည်လုံးဝစိတ်ကူးမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သူတို့၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုတိုးစေပြီးသင်တည်ဆောက်ရန်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုပင်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်မှုကကောင်းသောအပြုအမူကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဆုချသည်ကိုပြသည်နှင့်၎င်းတွင်အောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏ကြောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်သင့်ကလေးငယ်ကိုသင်ကြားပေးခြင်းသည်အစပိုင်းတွင်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း သင့်ကြောင်ကိုသိကျွမ်းလာသည်နှင့်အမျှသင့်ကြောင်သည်သင်နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးလာသည်နှင့်အမျှသင်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်၊ သင်တို့နှစ် ဦး လုံးအတွက်အရာရာတိုင်းဟာပိုပြီးလွယ်ကူလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ကြောင်ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမူပြီးသူကြီးပြင်းလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မယ်။ မင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးရှိနေနိုင်တဲ့သူနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Noti ကြောင်များ » ကြောင်များ » သိချင်စိတ် »2လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုလေ့ကျင့်နည်း